OOH भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » ओ बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» OOH
OOH परिवर्णी शब्द
OOH को संक्षिप्त रूप हो घर बाहिर.
घर बाहिरको विज्ञापन, जसलाई डिजिटल आउट-अफ-होम (DOOH) विज्ञापन, बाहिरी विज्ञापन, बाहिरी मिडिया, र घर बाहिर मिडिया पनि भनिन्छ, घरमा नभएका यन्त्रहरूमा अनुभव गरिएको विज्ञापन हो। OOH विज्ञापनले बिलबोर्डहरू, प्रदर्शन विज्ञापनहरू, र पोस्टरहरू समावेश गर्दछ जब एक व्यक्ति आफ्नो घरबाट बाहिर हुन्छ र सामान्यतया विज्ञापनसँग सान्दर्भिक गतिविधिहरू गर्दछ। यसले नयाँ बजार, अडियो आउट-अफ-होम (AOOH) पनि समावेश गर्दछ।